Aza avela ho tonga ao an-dohanao ny fahombiazana ary aza avela ho tonga ao am-ponao mihitsy ny fahombiazana. - Ziad K. Abdelnour - Quotes Pedia
Aza avela ho tonga ao an-dohanao ny fahombiazana ary aza avela ho tonga ao am-ponao mihitsy ny fahombiazana. - Ziad K. Abdelnour
Ny fiainana miaraka amin'ny fiakarana sy ny faharavany. Isika rehetra dia manana dia manokana tsy manam-paharoa izay mitondra antsika mankany amin'ny toerana samihafa. Na dia tsy mitovy aza ny fiainantsika, dia misy fitsipika fototra azo ampiharina amintsika rehetra. Isika rehetra dia mahazo fahombiazana amin'ny fotoana iray ary isika rehetra dia mahatsapa ihany koa ny tsy fahombiazana.
Na dia miovaova ny haavon'ny fitenintsika, dia faly isika rehetra rehefa mahomby sy alahelo rehefa tsy mahomby isika. Ara-dalàna ny mahatsapa ireo fihetseham-po ireo fa ny zava-dehibe ho azontsika dia ny hoe avelantsika hisy fiantraikany amin'ireny fihetseham-po ireny.
Rehefa mahomby isika dia mahatsiaro tena ho reharehantsika, fa matetika manary ny fanetren-tena. Mety hahatsapa ho ambony noho ny olon-drehetra isika ary ny hafa kosa ambany. Tena manimba ny toetrantsika ireo toetra ireo ary manary fanajana ao anatin'izany fomba izany.
Rehefa mahomby dia tokony hitazona fahalemem-panahy sy fankasitrahana an'ireo rehetra nanampy antsika hahatratra ny toerana misy antsika isika. Tokony ho feno fankasitrahana isika fa mety ho eo amin'izay misy antsika ankehitriny. Amin'ny fotoana avelantsika ho eo an-dohantsika ny fahombiazantsika, manomboka ny fahalavoana.
Tsapanay fa tsy misy zavatra hikasika anay, ary navelanay ny mpiambina. Tsy miasa mafy izahay ary noho io avonavona sy tsy firaharahiana io; Ny iray dia manary izay ho tratrariny.
Toy izany koa, rehefa misy ny tsy fahombiazana, tsy tokony hanome tsiny be loatra ny tenantsika isika ka lasa kivy ny handrosoana. Tokony ho raisintsika ho lesona ny lesona ary hianarantsika avy amin'izany. Manampy antsika hiatrika sy handamina toe-javatra amin'ny ho avy amin'ny fomba tsara kokoa.
Tsy misy dikany
Ny tsy fahombiazan'ny sary mitanisa sary
Tsy mandiso velively
Fandresena amin'ny fomba tsy fahombiazana
Teny natoraly fahombiazana sy fahombiazana
Teny momba ny tsy fahombiazana
Teny momba ny fo sy ny saina
Teny momba ny fahombiazana sy ny fahombiazana
Katsaho ny fanajana, fa tsy ny saina. Maharitra ela kokoa. - Ziad K. Abdelnour
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny olona iray dia tsy mahavita ny haavon'ny fiainana afa-tsy amin'ny endrika mahasarika na ...
Na iza na iza miezaka hampidinina anao dia efa eo ambaninao. - Ziad K. Abdelnour
Hahita olona marobe ianao amin'ny fiainanao izay hitsara anao amin'ny zava-drehetra…